FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA COBBERDOG AOSTRALIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Cobberdog aostralianina
Sennie the Australian Cobberdog amin'ny 18 volana- 'Ny anaran'i Sennie voasoratra anarana dia' Rutlands Sensation '. Mpanoratra Cobberdog aostralianina izy. Ny Cobberdog dia nidina avy amin'ny karazana marina an'ny Labradoodle aostralianina ary nekena tamin'ny fomba ofisialy ho karazana madio amin'ny fampandrosoana tamin'ny Janoary 2012. Sennie dia manana tsy mandatsa, palitao mahazaka allergy izay antsoina hoe 'Wavy Fleece'. Ny lokony dia Caramel, izay midika fa crème dilute izy, misy orona volontsôkôlà sy pigmenta. Ny tena tianay indrindra momba an'i Sennie dia ny toetrany tsara tarehy, izay be fitiavana, feno fahafinaretana sy hadalana. Tena dodona izy hampifaly ary matetika tsy mila aseho zavatra iray fotsiny dia tadidiko. Rehefa mody avy miantsena izahay dia mihazakazaka mitady kilalao izy ary maka izany ary mitondra ho antsika fanomezana. Raha tsy misy kilalao mora raisina dia haka tapa-kazo na ravina mihitsy aza izy ary hipetraka eo alohanay manolotra azy ho fanomezana. Tianay izany! '
Ny Cobberdog aostralianina dia tsara amin'ny ankizy ary mora hampiofana . Mifanaraka tsara amin'ny alika hafa izany. Hendry tokoa izy io, hampahasosotra ary mahafaly, ary haingana hianatra asa tsy mahazatra na manokana. Mavitrika, miaraka amin'ny toetra mampihomehy mahatsikaiky, tiany ny mampihomehy ny olona., Afaka manandrana mandiso ny tompony izy raha tan-dalàna . Tena zava-dehibe ny hamafisin'ity alika ity fa tony, mpitarika fonosana tsy miova ary manome azy fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro ny sorohy ny olan'ny fitondran-tena . Sariaka, na dia mazava ho azy aza fa tsy mivadika amin'ny fianakaviany, ity alika ity dia tsy mahery setra. Fantatra amin'ny fientanentanana izay mahatonga azy ho mety indrindra amin'ny alika fitsaboana, alika fanairana ara-pahasalamana ary alika fanampiana, ny antony namolavolana azy.
cavalier mpanjaka sy bichon afangaro
Standard: Haavo 22 - 24 santimetatra (53 - 60 cm)
Standard: Vehivavy lanja 45 - 60 pounds (20 - 27 kg) 55 - 77 pounds (25 - 35 kg)
Miniature: hahavony 16 - 18 santimetatra (40 - 45 cm)
Miniature: lanja 25 - 35 pounds (11 - 16 kg)
Tsy misy fahasamihafana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy
Ity karazana ity dia nosedraina tamim-pitandremana ireo fahasalaman'ny ADN nandritra ny taranaka maro, miaraka amin'ireo mpitatitra aretina fantatra nesorina tamin'ny fandaharanasa fitomboan'ny mpiompy voasoratra MDBA. Ny fisoratana anarana amin'ny alika MDBA momba ny alika fiompiana dia mitaky ny fanondroana ny mombamomba ny ADN sy ny fanadiovana ireo aretina niseho tamin'ny karazany, anisan'izany ny PRA-prcd. Ny fitsapana ra isan-taona ho an'ny aretina Addisons dia atolotra ho an'ny alika fiompiana.
Ny Cobberdog aostralianina dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka manana fanatanjahan-tena sy ara-tsaina ary ara-batana ampy izany. Ilaina ny fanentanana ny saina, ary ny fifandraisana akaiky amin'ny maha-mpianakavy marina dia hisorohana ny fahazotoana miasa loatra sy ny filan'ny fampiasan-tena be loatra.
Hahafinaritra ity karazany ity a dia an-tongotra lavitra isan'andro . Tsy mila fanatanjahan-tena betsaka toy ny razambeny, ny Labradoodle aostralianina . Ny fanatanjahan-tena ara-tsaina, ny fifandraisan'ny mpianakavy akaiky, ny fampiofanana mialoha ary ny fanatanjahan-tena antonony dia hitazona azy ireo ho afa-po.
13-15 taona eo ho eo
Alika kely manodidina ny 4 ka hatramin'ny 10
Ny palitao olioly dia mila fikolokoloana tsy tapaka miaraka amin'ny borosy somary mahia isaky ny tapa-bolana ary angamba roa ka hatramin'ny intelo isan-taona, fehezam-bidy, scissoring na fametahana lamba mba hitandrina. Ny Cobberdog aostraliana namboarina tsara dia tsy manana palitao volo, fa palitao fohy na volon'ondry izay tsy milatsaka, ary sariaka amin'ny allergy amin'ny ankamaroan'ny tranga. Raha misy alikaola amin'ny rora alika ity olona ity dia tsy misy tombony manokana io karazany io raha toa ka misy ny allergy mitarika.
Ny Cobberdog dia nalaina avy amin'ny karazana marina an'ny Labradoodle aostralianina ary nekena tamin'ny fomba ofisialy ho olo-malaza amin'ny fampandrosoana tamin'ny Janoary 2012 avy amin'ny fisoratana anarana Master Dog Breeders and Associates (MDBA) Global Pure Breed.
MDBA = Mpiompy sy mpiara-miasa amin'ny alika lehibe
Sennie the Australian Cobberdog amin'ny 18 volana
Rouge ny alika kely Cobberdog aostraliana amin'ny 8 herinandro- 'Rouge dia alika kely vavy Cobberdog aostralianina madio, miaraka amin'ny palitao volon'ondry mena izay tsy mandatsaka sy sariaka amin'ny allergy. Tena be fitiavana sy be fitiavana ary hendry koa izy. Asehoy azy indray mandeha dia fantany izany. Zava-dehibe tokoa ny fananany fiofanana tsy miova, satria afaka mianatra ireo zavatra tsy tadiavintsika izy, toy ny zavatra tadiavintsika ihany! '
Kaya the Australian Cobberdog amin'ny 3 taona- 'Kaya dia lokon'ny sokola ronono, ary ny masony dia mamirapiratra sy mamirapiratra foana, manana toetra tsara izy ary tiany hampihomehy anay. Hanao an-karazany ny karazana lozisialy mandra-pihomehezantsika ary avy eo dia mihodinkodina anaty faribolana kely falifaly izy miaraka amin'ny rambony mihodinkodina toy ny angidimby. Rehefa sendra olana izy (izay tsy dia matetika, fa indraindray izy dia te-hiatrika surf raha misy zavatra matsiro mipetraka eo amin'ny dabilio!) Hisarika tarehy adaladala izy mba hihomehezana sy hanadinoantsika hiara-hiaraka aminy. Tena tovovavy hendry izy ary na dia maditra aza isika dia tsy afaka manohitra ny fomba mahafatifaty azy. '
Seanna the Australian Cobberdog amin'ny 4 taona- 'Seanna dia Cobberdog aostralianina, karazany iray izay nekena tamin'ny fomba ofisialy ho toy ny fifangaroana madio amin'ny fampandrosoana tamin'ny Janoary 2012. Nentina ho alika fanairana ho an'ny olona voan'ny diabeta sy alika fanampiana izy. Seanna dia manana palitao izay tsy mandena sy sariaka amin'ny allergy, izay marika mampiavaka ny taranany. Manampy be dia be ho an'ireo sembana na marary izay tsy mahazaka alika izany. Ny tena tiantsika indrindra momba an'i Seanna dia ny fomba malefaka sy ny toetrany mahafinaritra. Mahafinaritra izy miaraka amin'ny ankizy kely ary mifanerasera amin'ny biby hafa. Tsy ho hainy ny manao ratsy amin'ny olona na amin'iza na amin'iza. Seanna dia tia lalao fakana sary tsara ary mavitrika sy be hatsaram-panahy, tsara tarehy hijerena satria toa miloka izy rehefa mihazakazaka. Fa afa-po ihany izy ny matory mangingina eo akaikinao raha mbola mangina ianao. '
Seanna the Australian Cobberdog miasa ho Alert Alert Medical ho an'ireo olona voan'ny diabeta sy alika fanampiana
Zenith the red Australian Cobberdog amin'ny 5 taona- 'Zenith dia Cobberdog aostraliana mena. Ny Cobberdog dia nekena ho toy ny Pure Breed in Development tamin'ny Janoary 2012 ary novolavolaina ho alika fanampiana sy alika fanairana ho an'ny olona voan'ny diabeta. Zenith dia manana toetra malefaka sy tena mamy, indrindra ho an'ny alika lahy. Manana ny lafiny mampihomehy azy koa izy, ary mety ho hendry ary mampihomehy antsika imbetsaka isan'andro. Fa rehefa tsy salama ianao dia malemy fanahy izy ary faly mandry eo akaikinao mandritra ny ora maro. Zenith dia nianatra ny 'nampitandrina' ho an'ny diabeta sy ambany rehefa tamin'ny enim-bolana. Tena marani-tsaina izy ary tia mampifaly. Tianay ny fijeriny mivantana ny masontsika hahita izay tadiavinay avy aminy. '
Zenith ilay Cobberdog aostraliana mena, 5 taona niasa ho alika fanairana ho an'ny olona voan'ny diabeta sy alika fanampiana
Weimaraner Alika fampahalalana sy sary
Zuchon (Shichon) Fampahalalana momba ny alika sy sary
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Schneagle
Lisitry ny alika kely mifangaro amin'ny alika kely
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shollie
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Maso Mastiff goavambe
Sary momba ny fiompiana alika mpiompy himalayan
Sary avy amin'ny alika bulldog alika, 4
shar pei sy laboratoara
fifangaroan'ny bulldog anglisy dane tsara
fotsy sy Tan Cocker spaniel
amidy alika coyote amidy
labrador retriever rhodesian ridgeback mix